China Magnetik ntụ ntụ breeki rụpụta na ụlọ ọrụ | Kangpa
1. A dịgasị iche iche nke akara nwere ike rụrụ n'ụzọ dị mfe.
2. Ọ nwere ike iru na-aga n'ihu eji ọrụ.
3. Anọrọ na torque.
4. Enweghị ụda tweet. Mkpịsị mkpịsị ụkwụ nke ime ihe ga-eme na usoro esemokwu, mana ọ gaghị eme ebe a, ọ gaghị enwe ụda njikọta, yabụ ọrụ ahụ dị jụụ.
5. Ike ikpo oku buru ibu. N'ihi na ojiji nke magnetik ntụ ntụ na magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide na ezigbo jụrụ usoro, ọ ga-eji na udo nke uche ọbụna na oké na-aga n'ihu eji ọrụ.
6. A na-eji ire ụtọ na-aga n'ihu ma na-akwọ ụgbọala ala nwere ike nweta. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ nke esemokwu esemokwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụọgụ nke esemokwu na-agbanwe agbanwe, ọ gaghị enwe mkpọtụ mgbe ejikọtara ya n'ụzọ zuru oke, enwere ike ịhazigharị na ngwangwa dị ka ibu ahụ.
1. Nchịkwa ọkụ dị elu nke dị elu na-achịkwa njikwa dị ukwuu, na njikwa njikwa dị elu. Ntughari nnyefe na ihe na-akpali akpali dị na nhazi ziri ezi, nke nwere ike ịghọta njikwa dị elu.
2. Elu anwụ ngwa ngwa na ogologo ndụ, na-eji super alloy magnetik ntụ ntụ na ibu okpomọkụ na-eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, ọxịdashọn-eguzogide ma na corrosion eguzogide, na ogologo ndụ.
3. Ezigbo nkwụsi ike nke njirimara igwe na-agbanwe agbanwe Magnetik ntụ ntụ nwere ezigbo magnetik, na ike ijikọ dị n'etiti ahụ bụ nke kwụsiri ike, na ntanetị ahụ na-agba ọkụ na-adịgide adịgide. O nweghi mmekorita ya na onu ogugu enwere ike ma nwee ike jigide nsogbu ya oge obula.
4. Na-aga n'ihu eji ọrụ na-eji a jụrụ Ọdịdị na magburu onwe okpomọkụ dissipation mmetụta na edo thermal deformation, tinyere na akwa okpomọkụ na-eguzogide nke magnetik ntụ ntụ, nke na-enye ohere nnukwu njikọ na braking ike na eji ike, na ike were were slide na-enweghị na-eme ka vibration.
5. Njikọ ahụ dị mma, mmetụta dị obere mgbe enweghị mmetụta ọ bụla, ọ nwere ike ịmalite ma kwụsị iji nwayọọ na-enweghị mmetụta. Ọzọkwa, nguzogide na-eguzogide dị obere ma ọ gaghị akpata ọgbọ na-enweghị isi.
6. Kwesịrị ekwesị maka arụmọrụ dị elu na nzaghachi ngwa ngwa na usoro ikpo ọkụ ọkụ pụrụ iche, kwesịrị ekwesị maka arụmọrụ dị elu.
7. Dị fechaa, mmezi-free, ogologo ndụ, kọmpat na fechaa, na-eji elu-okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ coils na pụrụ iche griiz biarin, na-etinye pụrụ iche na-eguzogide ọgwụgwọ na armature na-ewekarị na-eyi ịgbatị ọrụ ndụ.
N'ihi na nke e ji mara n'elu magnetik ntụ ntụ brek, ọ e ọtụtụ-eji papermaking, obibi akwụkwọ, plastik, roba, textiles, obibi na dyeing, waya na USB, nkà mmụta banyere ígwè, na ndị ọzọ yiri asọfe nhazi ụlọ ọrụ maka unwinding na asọfe erughị ala akara. Ke adianade do, magnetik ntụ ntụ ipigide nwekwara ike-eji maka echekwa amalite, bufee nchedo, ọsọ ụkpụrụ, wdg Magnetik ntụ ntụ brek na-na-eji maka dynamometer loading na braking nke nnyefe ígwè.
Nke gara aga: PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101C
Osote: PUR ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101B
Powder ipigide breeki
Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Hot gbazee gluu Ngwa, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine,